Tag: nharembozha app analytics | Martech Zone
Tag: nharembozha app analytics
China, August 4, 2016 China, August 4, 2016 Douglas Karr
Kana iwe uine mobile application yakaburitswa, Flurry Analytics ndiyo yaunofanirwa kuve nayo. Zviri kune Zvikumbiro zveMafoni seGoogle Analytics kune mawebhusaiti. Zvinenge zvese nharembozha mupi anoshanda kubatanidza Flurry mune avo mhinduro saka kazhinji hapana chikonzero chekuwedzera kubatanidzwa sezvo iwe uchishandisa wechitatu bato mapuratifomu. Yedu nhare mbozha yakagadzirirwa neBluebridge, yedu nhare inotsigira, uye ivo vanobatanidzwa neFururry. Uye kana iwe wagadzira muunganidzwa wemaapplication, Flurry inokutendera iwe
Kugadzira uye kuendesa mafoni ekushandisa kunogona kuve kunonetesa, kushandisa zviwanikwa uye kunetesa maitiro emakambani. Kungo tora mvumo kubva kuApp Store pane dzimwe nguva kungave kusununguka, usambofa wakazvifunga uchinyatsogadzirisa yako nharembozha. Uye kana iwe ukaona kuti kune mikana yekunatsiridza kana kusimbisa iyo app, zvinowanzoreva kuwedzera kuwedzera uye kusunungurwa kutsva. Kune dzimwe nzira kunze uko, zvakadaro. Leanplum ndeye yakazara-yakasanganiswa yekugadzirisa mhinduro yemafoni maapplication kubatsira
NeChishanu, Nyamavhuvhu 22, 2014 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
MobileAppTracking inopa SDK (Android kana iOS) kuti ibatanidze zviri nyore kuburitsa pane chero netiweki yekushambadzira kana yekushambadzira mudiwa mune yako budiriro sisitimu. Kamwe iyo SDK yabatanidzwa, iwe unokwanisa musimba kuteedzera zviitiko kubva kune chero wechitatu-bato mudiwa. MobileAppTracking haivimbe neiyo UDID senge nzira yekupa - ivo vanotsigira dzimwe nzira dzekupihwa dzinoenderana nemaitiro ezvitoro zveapp. Teedzera nharembozha yekuisa uye mushandisi kubatanidzwa kudzokera kune yako nhare kushambadzira